Snapdragon 865 ga - abịa na nkwado maka LPDDR5 RAM | Gam akporosis
Snapdragon 865 ga-abịa na nkwado maka LPDDR5 RAM
El Qualcomm Snapdragon 855 Ọ bụ chipset flagship nke ụlọ ọrụ ahụ nke na-eme ka ọtụtụ smartphones nwere elu-elu wepụtara n'afọ a, onye ga-anọchi ya ga-agbaso na ọ bụghị n'ọdịnihu dị anya.
Companylọ ọrụ amalitela ọrụ na bọmbụ chipset ya na-esote, nke a na-atụ anya ka a kpọọ ya Snapdragon 865. SD855 nwere akara ngosi dị n'ime 'SM8150' ma wee kpọọ ya 'Hana'. Dị ka akụkọ ndị ahụ si kwuo, nke a nwere nọmba nlereanya "SM8250".
Ekwuru na aha njirimara nke chipset flagship na-abịa «Klọ ọrụ Kona». "Kona" bụ aha na-ezo aka na agwaetiti Hawaii. N'ụzọ na-akpali mmasị, Qualcomm kwadoro nzukọ Summit Qualcomm na Hawaii iji webata ndị nhazi ya dị elu na Disemba.
Ọ bụ ezie na amachaghị banyere Snapdragon 865 processor, ekwuru ya chipset ga-abịa nkwado maka LPDDR5 RAM. Qualcomm enweela ihe atụ nke SM8250 ọhụrụ ahụ ma na-anwale ha na LPDDR5 RAM, na-ahapụ ya onye onye rere ya bụ.
Agbanyeghị, ọ ga - adị ogologo oge tupu anyị ahụ ihe ọ bụla metụtara Qualcomm's na-abịa flagship Snapdragon 865 chipset. Ya mere, anyị nwere olile anya ịmatakwu gbasara SoC a n'ọnwa na-abịanụ.
Ka ọ dịgodị, TSMC ekwuputala ọkwa usoro 5nm ọhụrụ ya, nke na-atọ ntọala maka Apple A14 chipset, ihe nhazi nke ga-enye Apple iPhones ike na 2020. Anyị na-atụ anya na a ga-emepụta chipset Qualcomm site na iji usoro 5nm, ebe ọ bụ na ọ maara nke ọma na asọmpi n'etiti ndị nrụpụta abụọ a siri ike, anyị enweghị ike ịtụ anya obere ihe na ngalaba a. Agbanyeghị, maka oge ahụ, ihe niile nọ na njide.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Snapdragon 865 ga-abịa na nkwado maka LPDDR5 RAM
Google Play ugbua na-anwale ule ihe eji eme ihe
Realme 3 Pro ga-ebido na Eprel 22 a